La hatsaran-tarehy Sehatra midadasika be izy io, izay ahitan'ny vehivavy fomba hijerena tsara tarehy, toy ny maro kokoa ary hahatsapa ho maivamaivana. Noho io antony io, avy amin'ny gazetinay dia manisy lanja lehibe an'io lafiny io izahay, izay manarona ireo faritra samy hafa amin'ny hatsarana, hatrany amin'ny fomba fijery matihanina ary manolotra torohevitra roa hanatanterahana fika sy vaovao farany avy amin'ireo marika mifandraika amin'ity tontolo ity.
Amin'ity fizarana ity dia holazainay aminao ny torohevitra handefasana indray ireo faritra samihafa amin'ny vatanao, hatoro izahay mamokatra hanatanterahana izany ary hijery olo-malaza ihany koa isika hanandrana hanaraka ny makiazy matihanina, ohatra.
Manjamaso, Fandram-bolo, fantsika, menaka manitra na fitsaboana hatsaran-tarehy koa ho hita ao amin'ity fizarana ity, izay havaozina hatrany ary hilaza aminao ny tsiambaratelo rehetra hahitana lafatra.
Torohevitra makiazy ho an'ny vao manomboka
ny Toñy Torres hace Ora 10 .
Mahafinaritra ny makiazy, mamorona, milalao ary mety ho an'ireo rehetra te hampiasa azy ho mpanelanelana ...
Hainao ve ny manisy «blush»? Toa zavatra tsotra be izy io ary tsy hoe mila manasarotra be ny tenantsika isika, fa ao ...
Ny volomaso dia tsy maintsy hikarakara azy ireo foana koa, satria hanome endrika bebe kokoa ny tarehy izany ary satria ampahany lehibe amin'ny ...
Te hanana pedicure matihanina ve ianao? Ka tsy misy na inona na inona toy ny fanarahana andian-dingana fototra ary manomboka ny tenanao hanao izany am-pitoniana ao ...
Ny fanarahana fahazarana tsara tarehy dia tena ilaina mba hankafizanao ny hoditra salama sy tsara tarehy. Fa anio ...
Mandondom-baravarana ny fararano ary miaraka aminy, fironana makiazy vaovao tonga hanome loko ho an'ny ...
Raha misy fironana lehibe amin'ny lamaody amin'ny vanim-potoana vaovao, dia hisy koa ny loko volon'ny volo….
Te-hampiseho taovolo ankehitriny misy volo miverina amin'ny lehilahy ve ianao? Na dia fahita amin'ny vehivavy aza ny mahita ...
Te hanana hevitra vaovao momba ny taovolo ho an'ny lisea ve ianao? Satria manomboka izao ny fampianarana ary amin'izany, tsy misy tsara kokoa noho ny manao azy ...
ny Toñy Torres hace Herinandro 2 .
Ny fanaovana makiazy maso raha manao solomaso ianao dia mety hahasosotra kely raha tsy hainao ny manao azy. Solomaso manao ...
Asehoy ny makiazy mba hiasa indray
Fotoana hiverenana miasa izao ary tsy fantatrao ny fomba hametahana haingana makiazy mba hahafinaritra toa kely amin'ny ezaka kely? Io dia…
Fomba hitsaboana fantsika mainty
Ahoana no fanasitranana fantsika
Ahoana ny fomba hampihenana ny fivontosan'ny pimple, ny tetika tsara indrindra!